admin, Author at ALANZAYAR - Page 212 of 218
“မန်မန် စားချိန်လေး ရေကျောက် ပျောက်ခါစဆိုတော့ပိုချွဲနေတာပေါ့ အမျိုးတို့ရေ သားသားလေး ဆိုင်းတေဇ”
“မန်မန် စားချိန်လေး ရေကျောက် ပျောက်ခါစဆိုတော့ပိုချွဲနေတာပေါ့ အမျိုးတို့ရေ သားသားလေး ဆိုင်းတေဇ” ဗွီဒီယို လေးကိုကြည့်ရတာ အရမ်းကြည်နူးမိသလို ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။မျိုးဆက်သစ် မိဘမေတ္တာ ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းက ဘုန်းဘုန်းတွေလည်း လူမဆန်တဲ့မိဘတွေကြောင့် အလုပ်တွေ ပိုလို့ သာသနာ့အကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ နှောင့်နှေးနေပါပြီ။ သိုသော်လည်း မိဘမေတ္တာ ငတ်မွန် နေကြတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် […]
မိန်းကလေးများအားလုံး ချစ်တော့ချစ်ပါ စိတ်ကို အလိုမလိုက်ပါနဲ့ ကျမ ဆေးဆရာမ တစ်ယောက်ပါ။” မနေ့က ကျမရဲ့ ဆေးခန်းကို မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာ ဆုံးသွားတယ်။အကြောင်းရင်းကို သူ့ကိုယ် လိုက်ပို့တဲ့ သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးဟကိုယ်ဝန်ရှိတော့ ထားခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်သူမှမသိအောင်ဖျက်ချတယ်။ နည်းစနစ်မမှန်တော့ တချောင်ချောင်နဲ့ ဖျားတယ်။သူ့အမေနဲ့ […]
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော်
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော် “ငါ့သမီးကို အမေမှာချင်တယ်”ငါ့သမီးလေးရယ် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတာတော့ ခေတ်သဘာဝမို့ အမေမပြောလိုပါဘူးသမီးရယ် ဒါပေမယ့် မေမေမှာချင်တာက… ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ထား ခြင်းမရှိဘဲ ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ထားပြီး ဓာတ်ပုံတွေ တွဲရိုက် တွဲတင်နဲ့ မေမေသူများတွေပြောလို့ အကုန်သိပြီးပြီ သမီး …သမီးရယ် … သမီးရည်းစားက တကယ်လို့သမီးနဲ့ […]
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှတစ်ချို့သော မိန်းကလေးများအကြောင်း သိပြီးပြီလား
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှတစ်ချို့သော မိန်းကလေးများအကြောင်း သိပြီးပြီလား မြန်မာနိူင်ငံဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုထားရတာ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြန်မာ့အိနြေ္ဒ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ဟန်ပန်တွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရတယ်(မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့နဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးအချို့တော့ရှိပါတယ်) ဟိုးအရင်တုန်းက ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ မြန်မာမင်းသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးမှာမြန်မာဝတ်စုံပဲဝတ်ပြသွားပီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကျက်သရေကိုကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ ဒါတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ကိုထိန်းသိမ်းပြသွားတာတွေဒီနေ့ခေတ်မှာတော့….Facebook […]
တစ်ကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ တစ်ကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ ဖာခေါင်းများသို့ပေးစာ ယခုခေတ် လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြ​စေလိုပါတယ်​​နော်​. a´ ” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ “b´ ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီးတစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအနည်းငယ်အကြာ……bဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး […]
Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် ၏စာစောင်ကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု […]
အဖေသာမူးလဲပီးအသေခံမယ်ငါ့သားသမီးမြေကြီးပေါ်မကျစေရဘူးဆိုတဲ့ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့ တုနိုင်းမဲ့မေတ္တာတရား
အဖေသာမူးလဲပီးအသေခံမယ်ငါ့သားသမီးမြေကြီးပေါ်မကျစေရဘူးဆိုတဲ့ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့ တုနိုင်းမဲ့မေတ္တာတရား ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပီးမိဘတိုင်းဟာသားသမီးအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတွေစေတနာတွေကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေ။ လောကမှာမိခင်မေတ္တာတင်ကြီးမှားလှတာမဟုက်ပါဘူဗျာ။ဖခင်မေတ္တာဆိုတာလည်းတုနိုင်းမဲ့မေတ္တာရှင်ဂန္တဝင်ဖေဖေပါ။ အဖေဆိုတာ ပါးစပ်က ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်ရင်ထဲမှာတော့ သားသမီးတွေအပေါ် ချစ်တဲ့စိတ် အပြည့်ရှိတယ်။ အဖေဆိုတာ ငွေကြေး အများကြီး ရှာနိုင်ချင်မှ ရှာနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် သူရှာကြွေးတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ မိသားစုကို ထမင်း နပ်မှန်အောင် ကျွေးမယ့်လူမျိုးပါ။ အဖေဆိုတာ ပညာတတ်ချင်မှ […]
ဗွီဒီယို လေးကိုကြည့်ရတာ အရမ်းကြည်နူးမိသလို ဝမ်းနည်းမိပါတယ်…
ဗွီဒီယို လေးကိုကြည့်ရတာ အရမ်းကြည်နူးမိသလို ဝမ်းနည်းမိပါတယ်… မျိုးဆက်သစ် မိဘမေတ္တာ ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းက ဘုန်းဘုန်းတွေလည်း လူမဆန်တဲ့ မိဘတွေကြောင့် အလုပ်တွေ ပိုလို့ သာသနာ့အကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ နှောင့်နှေးနေပါပြီ။ သိုသော်လည်း မိဘမေတ္တာ ငတ်မွန် နေကြတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် ကြည် နူးအေးမြလှတဲ့ မေတ္တာကို အဖေလိုတစ်မျိုး အမေလို တလှည့် […]
ဆူမယ်ဆိုတော့လည်း မဆူရက်တဲ့ ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းရုပ်သံလေး
ဆူမယ်ဆိုတော့လည်း မဆူရက်တဲ့ ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းရုပ်သံလေး ပရိတ်သတ်ကြီးရင်ထဲလည်း ပီတိဖြစ်မိရင် ရှဲသွားနော် မနက်ဆွမ်းကျွေးရှိလို့ ဆွမ်းပွဲပြင်ခိုင်းပါတယ် ဆူမယ်ဆိုတော့လဲ ကိုယ့်အဆိုး ဆူမယ်ဆိုလည်း ရွာပြန်မယ် ဆူမယ်ဆိုတော့လဲ အလုပ်ကပြီးအောင်လုပ်ထားတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းသဖြင့် မူရင်းတင်သူ Ma Khaing ဆီမှကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါသည် unicode ဆူမယျဆိုတော့လညျး မဆူရကျတဲ့ ကွညျနူးစရာမွငျကှငျးရုပျသံလေး ပရိတျသတျကွီးရငျထဲလညျး ပီတိဖွဈမိရငျ […]
အပျိုလေးတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောင်္ကျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အေကြာင်းရင်း (၅) ချက်….။
အပျိုလေးတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောင်္ကျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အေကြာင်းရင်း (၅) ချက်….။ ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်းရှိရက်သားနဲ့…. ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ […]
« 1 … 211 212 213 … 218 »